मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दै, बिस्व मै नयाँ सकेत | नेपाल इटाली डट कम
मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दै, बिस्व मै नयाँ सकेत
May 17, 2014 — nepalitaly
दिनेश बाला श्रेष्ठ
भारतमा हुँदै गरेको पछील्लो निर्वाचन परीणाममा अाज विश्व केन्द्रित छ। तीन तिरबाट भारतले घेरेको हाम्रो देश नेपालमा यस असर धेरै हुनु अस्वाभाबिक हैन। प्रश्नहरु पनि उठेए रहेका छन। अब भारतले नेपाल प्रती कस्तो निति ल्याउछ? आफु धर्म निरपेक्ष भए पनि नेपाल हिन्दू अधिराज्य नै रहनु पर्ने दाबी गर्दै आएका मोदीले अब नेपाल सँग कुन ढंगले सहकार्य गर्ने छन? यि सबै कौतुहलको बिषय बनेकोको छ हाम्रो नेपाल सरकार, नेताहरु देखी जनताहरु सम्म । विश्वमा सर्बाधिक प्रख्यात गनतान्त्रिक राष्ट्र भारतको यस् पटकको निर्वाचनमा देखिएको मोदी प्रतिको विश्वासले भारतको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रुप लिसकेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र भारत मुखी भएकोले नेपाललाई असर त गर्ने नै छ तर साकारअत्मक या नकारत्मक चाँही अहिले नै भन्न सकिन्न। भारतीय नेता नरेन्द्र मोदीले आफ्नो उदय सगै मानब समाजमा महत्वपूर्ण शिक्षाको बिकास पनि गरेका छन। उनको सफलताले नेपाली नेताले सिक्नु पर्ने पाठहरु
१) बलियो आशय
२) सकारात्मक सोच
३) प्रबिधीको सही प्रयोग
५) सही रणनिती
६) कठोर परिश्रम
८) लक्षमा केद्रित
९) देश र जनतामा समर्पित
यसो त मोदीलाई हिन्दूबादी छबीले पनि धेरै लोकप्रिय बनाएको हो तर धर्मिक कारण बिबादस्पद बने तापनी देश र जनाताको हितमा काम गरेको कारण नै आज उनले सफलता पाएका हुन.मोदीको उदययले दक्षिण एशियामा मात्र नभै बिस्वमा नै नयाँ सकेत देखिएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशमा मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । अमेरिकी अर्थतन्त्रको दबदबा बढेको गुनासो बढिरहेको भारतमा अमेरिकी प्रभावभन्दा अलग र स्वतन्त्र राजनीतिक आर्थिक विकासको सम्भावना एकातिर छ भने दक्षिण एशियामा पश्चिमा प्रभावमाथि धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
रुस र भारतवीचको सम्बन्ध नजिक हुन सक्ने र बलियो भारत बन्न सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । रुसका पुटिनजस्तै मोदी दक्षिण एशियाका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
किशोरावस्थामा मोदीले आफ्ना परिवारका सदस्यसँग चिया दोकानमा काम गरेका थिए । आमा बुबाका ५ सन्तानमध्ये तेस्रो सन्तान मोदीले रेल्वे स्टेशनमा चिया बेच्ने क्रममा आमा बुबालाई सघाएका थिए । स्कुलमा उनी औसत छात्र थिए । तर, वाद-विवाद र नाटकमा उनको विशेष रुची थियो । उनको रुची राजनीतिमा पनि थियो ।
मोदीले राजनीतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर र एमएस्सी उत्तीर्ण गरेका छन् । उनी कवि पनि हुन् । उनले गुजराती र हिन्दीमा कविता लेख्ने गरेका छन् । उनी पूर्णतः शाकाहारी हुन् । उनी हिन्दीमा धाराप्रवाह भाषण गर्छन् । साथै पछिल्लो समय अंग्रेजीमा पनि भाषण कला सिकेका छन् ।
सामान्य मध्यम परिवारमा जन्मेका मोदी विद्यार्थी कालमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग जोडिएका थिए.विद्यार्थी हुँदा उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमा नियमितरुपमा जाने गर्थे । यसैक्रममा उनी संघको प्रचारक बने । उनले प्रारम्भिक दिनमा भाजपाको राजनीतिलाई मद्दत पुर्‍याए । भारत-पाकिस्तान दोस्रो युद्धका बेला उनले स्वेच्छिकरुपमा सैनिकहरुको सेवा पनि गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री हुँदा उनले ल्याएको गुजरातको विकास योजना विशेष चर्चित रहेको छ । आतंकवादप्रति मोदी आक्रामक छन् । मुम्बई हमला लगायतका आतंकवादी हमलाका विषयमा उनी मनमोहन सिंहले नरम नीति अपनाएको भन्दै मोदीले आलोचना गर्दै आएको स्मरणीय छ । भारतको माओवादी हिंसाप्रति पनि मोदी आक्रामक मानिन्छन् ।
मोदीको आलोचना विशेष गरी गुजरातमा भएको हिन्दू-मुस्लिम दंगालाई लिएर गर्ने गरिएको छ । यही कारणले बीजेपीले उनलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारका रुपमा अगाडि सार्दा पार्टीभित्रैबाट केहीले उनका आलोतना समेत गरेका थिए । मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्दा मुस्लिम समुदायको भोट कम आउने डर केही बीजेपी नेतामा थियो ।
श्रोत: बिभिन्न अलाइन पत्रीकाहरु
« Expedition L’Aquila ‘’An Amazing City of Italy”
नेपालकी दृष्टि दाहालले लिटिल मिस युनिभर्स »